44 Responses LeaveaReply Cancel reply
ဖိုးလုံး November 21, 2012 - 8:36 pm “ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် စာရင်းသွင်းဖို့ တောင်းဆိုတာက တထောင်မှာ တရာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လ၀ကက စစ်လိုက်တော့ အဖေကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ အမေကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ သားသမီးကျမှ ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ချင်တာက ဆန္ဒစွဲတွေဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ဆိုသည်။”
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 22, 2012 - 3:19 am အဖေ ဘင်္ဂါလီ၊ အမေ ဘင်္ဂါလီ ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွေးလို့ ရခိုင် ဖြစ်ချင်တာက ကြားကောင်းသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလို အတင်း ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်လို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။
Reply Ko Thet November 21, 2012 - 8:40 pm That’s right! I liked and welcome Obama’s visit to Myanmar but he isavisitor to us regardless of the president ofapowerful country, so he should not use suchaword to show off his supports for human rights. This is very sensitive issue and he didn’t seem to understand the long history of invasion of Bangalis and current conflict in Rakhine state. Our government has the right to protest such an indiscriminate usage of word even he is Obama. Cheers!
Reply swe htwe November 22, 2012 - 1:12 am That’s right. I admire Mr Obama but we must protect our country. Let’s cheer our president. Our country is the first.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 22, 2012 - 3:38 am ကိုသက် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ဦးဦး အိုဘားမားကို မေးချင်တာက ဦးတို့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာလဲ ဟိုးရှေး နှစ် ရာပေါင်းမျာစွာက အကြွေးနဲ့ သိမ်းထား၊ နယ်မြေချဲ့ထွင် စစ်တိုက် သိမ်းယူထားခဲ့တဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားတို့၊ တက်ဆက်နဲ့ နယူးမက္ကဆီကို နယ်မြေတွေကို အရင် ပိုင်ရှင်ဟောင်းတွေရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေက စာရွက်စာတမ်းမရှိပဲ ၀င်လာတော့ တရားဝင် နေခွင့် (ဂရင်းကပ်) ထုတ်ပေးလို့လား။ ကားမောင်းဘို့ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်တောင် မပေးရဲဘူး မဟုတ်လား။ ဖမ်းပြီး ပြန်ပို့နေတာပဲ မဟုတ်လား။ သူတို့လဲ သူတို့နိုင်ငံမှာ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလွန်းလို့ ဒုက္ခခံ ၀င်လာပြီး အောက်ခြေသိမ်း အခြေခံ အလုပ်တွေ လာလုပ်သူတွေပဲ။
Reply aungmon November 22, 2012 - 8:15 pm Hi sister I very very like ur post.Right sure!
Reply monica November 23, 2012 - 12:46 am အမေရိကန် ထဲဝင်လာသူ ဘယ်လိုလူကိုမှ ဖမ်းပြီးပြန်ပို့့တဲထုံးစံ မရှိပါ
Reply American rakhine November 26, 2012 - 12:44 pm Are you sure about illegal immigrants in U.S
Reply zaw November 21, 2012 - 9:32 pm NO IMMIGRATION LAW, NO HOME
Reply MARTIN LUTHAR November 21, 2012 - 9:47 pm VERY GOOD U THEIN HTAY.THANK YOU FOR YOUR PATRIOT.
Reply Tayort Gyi November 21, 2012 - 9:48 pm ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက “ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အင်မတန်မှ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေနဲ့ရော၊ ရှေ့က အစိုးရ အဆက်ဆက်အနေနဲ့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုသော် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ အချက်ကိုသော် လည်းကောင်း လက်ခံထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတာပါ” ဟု ရှင်းပြသည်။ ကျနော်မေးချင်ပါတယ်ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးကို…စာမတတ်ဘူးလားလို့။ ဦးနုခေတ် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီတုန်းက ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ပြီး မြန်မာအသံ တိုင်းရင်းသားအစိစဉ်မှအသံလွင့်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Reply kevin November 25, 2012 - 11:48 am @ tayote gyi, i doubt you are chinese , notarohingya. You are not clever enough to understand the gov’s decision bcos u dont consider what is the recent situation and what shouldbthe solution. What just happening in arakan? Can you say to public at this moment like rohingya is your ethnic brother? You will never understand the gov’s approach bcos you are zero in politics. They are gov so they must act politically. U Nu didnt make any legal about rohingya but for his politics only. You can find in myn census records. And moreover, U Nu was just one gov who used it for political gain although other former succeeded goverments didnt support that politic about rohingya. Pls make cautious criticism if u can.
Reply American rakhine November 26, 2012 - 12:52 pm You are really !!!!!, you should not live in Burma
Reply KO PWA November 21, 2012 - 9:56 pm Good
Reply aungmon November 22, 2012 - 8:06 pm very good
Reply snow November 21, 2012 - 10:02 pm အင်းဒီလူသားတွေကိုအကြမ်းမဖက်အောင်
Reply Peace November 21, 2012 - 11:28 pm ကြုံလို့ပြောလိုက်ပါအုံးမယ် မိုးပွင့်စီမံချက်လာဘာလာလုပ်ပြီးတော့တောထဲကလူတွေကို
Reply ဦးနန္ဒောဘာသ November 22, 2012 - 11:10 am ဘင်္ဂလီဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး တောင်းဆိုလို့ မရဘူးလား။ အခုတောင်းဆိုနေတာက လူ့အခွင့်အရေးခြုံထားသော နိုင်ငံသစ်၊ လူမျိုးသစ် ထူထောင်ရန် ပဏာမပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျို့။
Reply swe htwe November 22, 2012 - 8:29 pm That’s right.
Reply ကိုမြန်မာ November 22, 2012 - 11:26 am မင်းတို့ ဘာမှရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ့ လျောက်ပြောမနေနဲ့ အစကတည်းက သူများပြောတာမခံချင်ရင် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်တကယ်ရှိခဲ့ရင် မြန်မာဆိုပြီးတော့ ရင်ကော့ပြီးနေနိုင်အောင် အစကတည်းက လုပ်ခဲ့ရင် ဒီပြသာနာတွေဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဖူး ဒီလိုဖြစ်လာအောင် မဆလ တခတ် န၀တတခတ် အဆက်ဆက် စစ်ခေါင်းရှောင်တွေ ကျင်သုံးခဲ့တဲ့ ဗျူဟာတွေပဲ အခုလည်း ရခိုင်အရေးကို အဓိကဖန်တီးခဲ့တာ လက်ရှိအစိုးရကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတာ လူအနည်းအငယ်ပဲသိထားပါတယ် အလွန်တရာကို ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ ဗျူဟာတွေကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတုန်းပါ
Reply aungmon November 22, 2012 - 8:09 pm right brother
Reply La Aung November 23, 2012 - 9:11 pm I am agree with U Thein Htay.We need more good and strong leaders in myanmar.97% of all myanmar people are with you(3% are Bingalain generations).Our contry.Our law and Our people.No democracy in Myanmar no problem,prefer NO BingaLain in myanmar.
Reply မောင်မှန် November 22, 2012 - 11:28 am ၀န်ကြီးပြောတာမှန်တယ်၊ခိုးဝင်လာသူကိုတပြေးညီလက်ခံလျှင်အားလုံးခက်ရချေရဲ့။အမေရိကကားမှာဒီဗွီပေးပြီးလက်ခံနိုင်လျှင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ
Reply burmese November 22, 2012 - 12:37 pm အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားပြောသလို ” ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခင်ဗျားတို့မှာရှိသလို ကျွန်တော်တို့မှာရှိသလို တူညီတဲ့ လူဂုဏ်သရေဆိုတာ ရှိပါတယ်”
Reply Thura Zaw Hein November 22, 2012 - 1:29 pm လ၀က၊ န၀တ/နအဖ နဲ့ နစဖ/ရေတပ် ဘက်ကလူတွေ၊ ဗိုလ်မြင့်ဦး ဓနုဖြူအကြောင်း ဖွင့်ပြောသလို သူတို့ လုပ်ခဲ့တာတွေကို (သို့မဟုတ်) မလုပ်ခဲ့တာတွေ အတွက် ထွက်ရှင်းပြမှ အကြောင်းအရာက ပိုပြီးပြည့်စုံ လာမှာပါ။
Reply FOX November 22, 2012 - 2:27 pm နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးထက်ကို နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့သာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်… ရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ် ဘင်္ဂလီပဲခေါ်ခေါ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တာကာလတစ်ခုအထိကိုကြာနေခဲ့ပါပြီ… ဒါကြောင့် Pass တစ်ခုခုပေးပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အတူတကွနေနိုင်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်…
Reply FOX November 22, 2012 - 2:38 pm အုိုဘားမားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း သူတို့နုိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရင်းခံပြီးတင်ပြသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်… ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်အသုံးချပြီး ပြုပြင်သွားနိုင်ရပါမယ်… ဒါမှကျွန်တော်တို့သူများအသုံးချခံမဖြစ်မှာ… နောက်မို့ဆို သူများကနဲနဲလေးသွေးထိုးလိုက် ကိုယ်တွေကရန်တွေဆက်ဖြစ်လိုက်ဆိုရင် ဒုံရင်းကဒုံရင်းပါပဲ… စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပဲထိုက်တန်တဲ့တုိုင်းပြည်ဖြစ်နေဦးမယ်… ဒါမျိုးတော့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူး… အပြင်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာကြပါဦး… သူများနုိုင်ငံမှာမျက်နှာငယ်တွေနဲ့နေနေကြရတယ်… မင်းတို့နိုင်ငံကအမြဲတမ်းစစ်ဖြစ်နေတယ်… လူသားအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုပြီးအပြောခံရတာတွေကနေလွတ်ချင်ပြီဗျာ…
Reply Phoenix November 22, 2012 - 6:34 pm General Thain Htay is right.Because h
Reply Aha November 22, 2012 - 7:46 pm ဒိလိုပြောလို့ ခင်ဗျာတို့စစ်အုပ်စု
Reply စစ်ကြီး November 22, 2012 - 7:50 pm စစ်အုပ်စုကို ကယ်တင်ရှင်လိုလို
Reply ဝင်ကြီး November 22, 2012 - 7:54 pm ကိုကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
Reply မော်စီတုံး November 22, 2012 - 7:56 pm တရုတ်နဂါးကြီးစိတ် ဆိုးနေပြီး
Reply ဗိုလ်မြ November 22, 2012 - 8:07 pm တရုတ်ကိုမှီ
Reply မူဆယ်သူ November 22, 2012 - 8:12 pm အိုဘားမား ဗမာပြည်ရောက်ရေား
Reply တေလေ November 22, 2012 - 8:21 pm မောင်းတောမှာ ဖမ်းမိ့တဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက
Reply အမ November 22, 2012 - 8:24 pm အစိုးရအသစ်ကိုသတိ့ပေးချင်တယ်
Reply cutelove November 22, 2012 - 9:34 pm nobody can help us..
Reply Aung Naine November 22, 2012 - 11:46 pm ‘အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားတဦးကဲ့သို့ အခြေခံ လူ့အခွင့် အရေးများ ပေးအပ်သင့်သည်ဆိုသော ပြောဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာအ စိုးရက လက်မခံကြောင်း’ နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောဆိုလိုက် ကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းအရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
Reply မင်းကြီးညို November 22, 2012 - 11:48 pm ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်မဟုတ်ပါ။ အနောက်ဖက်မှ ခိုးဝင်လာသူတွေသာဖြစ်ပါ
Reply timothy November 23, 2012 - 11:56 am Burmese immigration and authorities forced to write them as Bengali from Ne Win to Thein Sein. Everybody knows that. Thein Htay trrs to lie the same to former dictators.
Reply Babalay November 23, 2012 - 8:25 pm I am tamil. I am myanmar citizen eventhough my forefathers came from another country before ww2.I am very thankful for myanmar pepople. Rohinja are not myanmar people. They have no right to ask. They should respect myanmar people. Myanmar people are merciful people. myamar people can consider case by case if they want. They cannot consider rohinja as myanmar. They can consider individualy if they want. Dont take adventage. Please respect myanmar people.
Reply ဖိုးလုံး November 24, 2012 - 11:57 pm You are right Babalay. Thanks. We Myanmar people cleary know that who is good and who is bad. Our country has many Indians, Chinese who are living peacefully and getting along with our culture. We respect each other as well. Thanks again.
Reply ပြည်ချစ်သား November 26, 2012 - 6:09 pm ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူး ..
Reply မင်းကြီးညို November 29, 2012 - 7:21 am အိုဘားမားကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ယခုအမေရိကန်ဗီဇာ(ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်)နှစ်စဉ်ခေါ်နေ